Yohane 21 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yohane Kyerɛwtohɔ 21:1-25
Yesu yii ne ho adi kyerɛɛ n’asuafo no (1-14)
Petro maa Yesu hui sɛ ɔdɔ no (15-19)
“Ma me nguan nkumaa aduan” (17)
Nea ɛbɛto osuani a na Yesu dɔ no no daakye (20-23)
Awiei (24, 25)
21 Eyi akyi no, Yesu yii ne ho adi bio kyerɛɛ asuafo no wɔ Tiberia Po ho. Sɛnea oyii ne ho adi ni: 2 Ná Simon Petro ne Toma (a wɔfrɛ no Ata no)+ ne Natanael+ a ofi Kana a ɛwɔ Galilea no ne Sebedeo mma+ no ne Yesu asuafo foforo baanu wɔ hɔ. 3 Ɛnna Simon Petro ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Merekoyi nam.” Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛne wo bɛkɔ.” Enti wopuei, na wɔkɔtenaa ɔkorow mu, nanso saa anadwo no, wɔanyi nam baako mpo.+ 4 Bere a ade reyɛ akye no, Yesu begyinaa ɛpo no ano, nanso asuafo no anhu sɛ ɛyɛ Yesu.+ 5 Ɛnna Yesu bisaa wɔn sɛ: “Me mma, mowɔ biribi* di anaa?” Wobuaa no sɛ: “Daabi!” 6 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mungu asau no wɔ ɔkorow no nifa, na mubenya bi.” Ɛnna wogui, na mpataa no dodow nti, na wontumi ntwe asau no.+ 7 Na osuani a na Yesu dɔ no no+ ka kyerɛɛ Petro sɛ: “Ɛyɛ Awurade!” Bere a Simon Petro tee sɛ ɛyɛ Awurade no, ɔhyɛɛ n’ataade,* efisɛ na ɔnhyɛ hwee,* na ɔtow ne ho too po no mu. 8 Na asuafo a aka no de ɔkorow ketewa no bae, na wɔtwee asau a mpataa ayɛ no ma no kaa wɔn ho bae, efisɛ na wɔne asaase ntam kwan nware, bɛyɛ anammɔn 300* pɛ. 9 Bere a wobeduu mpoano no, wohui sɛ wɔasɔ ogya* de mpataa agu so, na na paanoo ka ho. 10 Na Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa mpataa a muyii no seesei ara no bi mmra.” 11 Ɛnna Simon Petro foroo ɔkorow no, na ɔtwee asau a mpataa akɛse 153 ayɛ no ma no baa mpoano. Ná ɛdɔɔso paa de, nanso asau no antetew. 12 Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommra mmedi mo anɔpa aduan.” Na asuafo no baako mpo annya akokoduru ammisa no sɛ: “Woyɛ hena?” efisɛ na wonim sɛ ɛyɛ Awurade. 13 Yesu faa paanoo no de maa wɔn, na ɔde mpataa no nso maa wɔn. 14 Efi bere a wonyan Yesu fii awufo mu no, eyi ne ne mprɛnsa+ so a oyii ne ho adi kyerɛɛ asuafo no. 15 Bere a wodii anɔpa aduan no wiei no, Yesu bisaa Simon Petro sɛ: “Simon, Yohane ba, wodɔ me sen eyinom anaa?” Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Yiw, Awurade, wunim sɛ mepɛ w’asɛm.” Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma me nguan mma aduan.”+ 16 Yesu bisaa no ne mprenu so sɛ: “Simon, Yohane ba, wodɔ me?” Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Yiw, Awurade, wunim sɛ mepɛ w’asɛm.” Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛn me nguan nkumaa.”+ 17 Yesu bisaa no ne mprɛnsa so sɛ: “Simon, Yohane ba, wopɛ m’asɛm anaa?” Petro werɛ howee sɛ Yesu bisaa no ne mprɛnsa so sɛ: “Wopɛ m’asɛm?” Enti ɔka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Awurade, wunim nneɛma nyinaa; wunim sɛ mepɛ w’asɛm.” Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Ma me nguan nkumaa aduan.+ 18 Nokware, nokware, meka kyerɛ wo sɛ, bere a woyɛ aberante no, na wo ara wohyɛ ataade nantew kɔ baabiara a wopɛ. Nanso sɛ wobɔ akwakoraa a, wobɛteɛ wo nsa, na obi de ataade ahyɛ wo, na ɔde wo akɔ baabi a wompɛ.” 19 Yesu kaa eyi de kyerɛɛ owu ko a Petro bewu de ahyɛ Onyankopɔn anuonyam. Bere a Yesu kaa eyi wiei no, ɔka kyerɛɛ Petro sɛ: “Kɔ so di m’akyi.”+ 20 Na Petro dan ne ho, na ohuu osuani a na Yesu dɔ no no+ sɛ odi wɔn akyi. Saa osuani no na na otweri Yesu kokom wɔ anwummere aduan no ase a obisae sɛ: “Awurade, hena na ɔreyi wo ama?” no. 21 Bere a Petro huu saa osuani no, obisaa Yesu sɛ: “Awurade, ɔbarima yi nso ɛ?” 22 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ mepɛ sɛ ɔtena hɔ kosi sɛ mɛba a, ɛno de, wode rehaw wo ho ayɛ dɛn? Wo de, kɔ so di m’akyi.” 23 Na asɛm yi trɛwee wɔ anuanom no mu sɛ saa osuani no renwu. Nanso Yesu anka ankyerɛ no sɛ ɔrenwu. Mmom ɔkae sɛ: “Sɛ mepɛ sɛ ɔtena hɔ kosi sɛ mɛba a, ɛno de, wode rehaw wo ho ayɛ dɛn?” 24 Oyi ne osuani+ a odi saa nneɛma yi ho adanse, na ɔno na wakyerɛw saa nneɛma yi ho asɛm. Na yenim sɛ n’adanse yɛ nokware. 25 Nokwasɛm ni, nneɛma foforo pii nso wɔ hɔ a Yesu yɛe. Sɛ wɔkyerɛw ne nyinaa a, minnye nni sɛ anka nhoma mmobɔwee a wɔbɛkyerɛw no bɛkɔ wiase mpo.+
^ Anaa “mpataa bi.”
^ Anaa “ɔde n’ataade kyekyeree ne ho.”
^ Anaa “ɔnhyɛ ataade papa biara.”
^ Bɛyɛ mita 90. Nt., “bɛyɛ basafa 200.” Hwɛ Nkh. B14.
^ Anaa “wɔasɔ gyabiriw; nnyansramma.”